सावधान ! तपाईमा पनि कतै ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने बानी त छैन ? | Rajmarga
सावधान ! तपाईमा पनि कतै ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने बानी त छैन ?
प्रविधिको युगमा मोबाइल एक अत्यावश्यक वस्तु बनेको छ । ट्वाइलेट वा बाथरुममा हुँदा फोन प्रयोग गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । यदि तपाईमा पनि यस्तै बानी छ भने अब त्यसो नगर्नुहोस् । ट्वाइलेटमा बसेका बेला गेम खेल्ने, च्याट गर्ने वा फोनमा बोल्ने गर्नु स्वास्थ्यमाथी खेलवाड गर्नु हो । यस्तो बानीले मृत्यु पनि हुनसक्छ।
ट्वाइलेटमा राखिएको ‘पेपर होल्डर’मा सबैभन्दा बढी किटाणु बसेका हुन्छन् । धेरै जसोले आफ्नो फोन त्यही ‘पेपर होल्डर’मा राख्ने गर्छन् । जसका कारण इ–कोइल, सालमोनेला, सि–डिफिसाइलजस्ता ब्याक्टेरिया फोनमा सल्किन्छ। अनि त्यहि फोन हामी दिनभर हातले समात्छौँ, त्यहि हातले खाने कुरा खान्छौं। यति गर्दा पनि ट्वाइलेटमा फोन बिना बस्नै सक्नुहुन्न भने, ‘स्पिरिट’ ले फोनलाई बारम्बार सफा गर्नुहोस् ।एजेन्सी
Previous post: यस्तो रुपमा दर्ता भयो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा संशोधन विधेयक
Next post: कपडा खोलेर विद्यार्थीको अगाडि डान्स गर्थिन् शिक्षिका, देखाउँथिन् अश्लील भिडियो